निर्देशन भन्दा गायननै प्यारो – वादल-Nagarikaawaj.com
निर्देशन भन्दा गायननै प्यारो – वादल
त्यसो त निर्देशन यात्रामै वादल प्रसाईले नाम कमाएका छन्, दाम पनि । तर उनलाई निर्देशन भन्दा गायन यात्रानै प्यारो लाग्न थालेको छ । किनकी पछिल्लो समय वादलको नाम गायन क्षेत्रसँग जोडिएको छ । पछिल्लो समयको चर्चीत गित ‘म वादल वनि’ ले त उनलाई एक खालको शक्तीनै प्रदान गरेको छ । र त, भन्छन् प्रसाई कार्यक्रममा भ्याईनभ्याई हुन थालेको छ । तर निर्देशन पेशा र गायन पेशा सँगसँगै अगाडी वढाएका वादन किन निर्देशनमा भन्दा गायनमा वढि झुकाव राखेका छन् त ? रामजी ज्ञवालीले गर्नुभएको अन्र्तवार्ता ।
तपाई निर्देशक कि गायक ?
– खै, गित पनि गाउ“छु, निर्देशन पनि गर्छु । ठ्याक्कै यहि भन्न सकिन ।
त्यसो भए गायन यात्रा ठिक कि निर्देशन ?
– मलाई गायन यात्रानै रमाईलो लाग्छ । गाउन रमाईलो हुन्छ, धेरै दर्शकहरुका अगाडी गित गाउदा झन उत्प्रेरणा जाग्छ । तर निर्देशन गर्न साह्रै अल्छी लाग्छ ।
हरेक जसो गायक विदेश पुगेर स्टेज शो देखाउन माहीर मानिन्छन्, तपाई विदेशका कार्यक्रममा पुग्नुभएको छैन ?
– म नेपालका हरेक जसो जिल्लामा पुगेर प्रस्तुती देखाईसकेको छु । तर विदेशका कार्यक्रममा जान पाएको छैन । अवको केही समयमै गल्फ कन्ट्रमा जाने विचार गरेको छु । भिषा आईसकेको छैन । आएपछि मात्रै थाहा हुने होला गईन्छ या गईदैन । खास त विदेशमा हुने यस्ता खालका कार्यक्रमहरुले कलाकारहरुलाई राहत मिल्छ । त्यही भएकाले पनि विदेश जान ईच्छुक भएका हौ ।
– तपाईसँग कुरा हुदै गर्दा विन्धवासीनी म्युजिक प्रालीको आयोजनामा कार्यक्रममा व्यस्त छु । त्यस वाहेक विभीन्न ठाउँमा प्रस्तुती देखाउन भ्याईनभ्याई जस्तै छ ।
दशैका कार्यक्रमले छुन सुरु गरिसक्या छैन ?
– अव यहि माहौलमा १० वटा जति कार्यक्रममा फिक्स भैसक्या छ । दशैको आसपासमा सवैजसो कन्सर्टमै वित्नेछ समय । यि वाहेक अन्य केही कार्यक्रमहरु पनि गर्नेछु ।
तपाईले गाएका गित मध्ये सवैभन्दा वढि अवार्ड पाएको गित ?
– ‘म वादल तिमी वर्षा’ नै हो । यो गितले मलाई धेरै चिनायो अनि अवार्ड पनि धेरैनै पायो । तर साईली माईली, लोक पप (झिल्के वादल) पनि चर्चित नै हो ।
दशै तिहारको के बनाउनुभएको छ योजना ?
– त्यस्तो योजना छैन । कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुन्छु । त्यस वाहेक त दशैतिहारको लागी ‘झिल्के वादल’ लिएर आएको छु । म्युजिक भिडीयोको छायाँकन सकिएको छ भने प्रोमो पनि सार्वजनिक भएको छ । तर म्युजिक भिडीयो आएको छैन । केही दिनमै आउनेछ ।
पछिल्लो समय सस्कृतीको जर्गेना गर्ने भन्दा वाहीर गएर गित तथा म्युजिक भिडीयो आउने गरेको आरोप छ नी ?
– ‘नेपाली संगितले सधै नेपालको संस्कृतीलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ ’ त्यसैले मैले मेरो एल्वममा मौलिकपन झल्किने म्यूजिक भिडियो बनाएको हु ।
तपाई गायन क्षेत्रमा आएको चाहि कतिवर्ष भयो ?
– म सानोमा निकैनै रुची डान्स तिर थियो । डान्स धेरैनै गर्थे । तर गायक हुन लेखेको रहेछ ।
स्वरले गायक वनाएको हो की मनले ?
– स्वर भन्दा पनि मनलेनै गायक वनाएको हो । सानोमा त्यत्ती राम्रो स्वर थिएन । पछि गायक हुने इक्षा जाग्दै गयो । भोकल क्लासहरु लिन थाले । पछि मिहेनत गर्दागर्दै गायक भए । अझ भनौ सुरुमा रहर त्यसपछि वाध्यता । झण्डै ४ वर्षदेखी गायन क्षेत्रमा क्रियाशिल छु भने २ वर्ष जति भैसकेको छ निर्देशन क्षेत्रमा ।